Yaa Ku Guuleysan Lahaa EPL? Yaase Afarta Sare Ku Dhameysan Lahaa? Hadii Ay Wax U Dhici Lahaayeen Sida Uu Saadaaliyay Khabiirka BBC-da Mark Lawrenson. - Laacib.net
Yaa Ku Guuleysan Lahaa EPL? Yaase Afarta Sare Ku Dhameysan Lahaa? Hadii Ay Wax U Dhici Lahaayeen Sida Uu Saadaaliyay Khabiirka BBC-da Mark Lawrenson.
Waa dhamaadka ololaha 2016/2017 ee horyaalka Premier League – sidoo kalana waa waqtigii uu shaqada saadaasha kulamada horyaalkaan ka nasan lahaa khabiirka BBC-da Mark Lawrenson, balse aan dib u eegno saadaashii uu sameeyay intii lagu guda jiray xili ciyaareedka iyo kooxda ku guuleysan laheyd.
Mark Lawrenson kaliya maahan inuu yahay saadaaliye waa falanqeeye ka tirsan BBC, sidoo kalana waa halyeey horay usoo maray kooxda Liverpool kaas oo muddo badan kasoo ciyaaray garoonka Anfield Road.
Sida iska cad, Lawro wuxuu horyaalka u saadaaliyay kooxda Liverpool, sidoo kalana midkood afarta sare ma siinin Manchester United iyo Arsenal kuwaas oo sida cad hadda u muuqda ku si wadajir ah u weyn kara.
Liverpool ayaa ku guuleysan laheyd horyaalka Premier League waliba si guuldaro la’aan ah iyadoo noqon laheyd kooxda labaad ee la gudoonsiiyo koobka dahabka kadib Arsenal hadii ay wax u dhici lahaayeen sida uu saadaaliyay Mark Lawrenson dhamaan kulamadii isbuuca.
37-kulan ayuu saadaal ka bixiyay marka laga reebo kulanka ugu dambeeya waxeyna Liverpool heshay 89-dhibcood, farqiga goolashana 53-gool, sida saadaasha Lawro tahay waxey afar dhibcood kaga qaadi laheyd horyaalka Chelsea oo hadda ah kooxda sida rasmiga ah ugu guuleysatay.
Nasiib wanaag Mark Lawrenson wuxuu saxay laba ka mid ah kooxaha heerka labaad u laabanaya madama Hull City, Middlesbrough iyo Swansea City ay heerka labaad u laaban lahaayeen hadii ay rumowdo saadashiisa, balse Swansea ayuu ku qaldamay waxaana booskaas galay Sunderland.
Dhanka kale Afarta sare waxey u muuqataa mid u rumoobi karta madama uu Chelsea, Liverpool, Tottenham iyo Man City – waxeyna ku xiran tahay guulo ay gaaraan Liverpool & Man City.